Arda Turan oo diiday inuu katago kooxdiisa Barcelona – Gool FM
Arda Turan oo diiday inuu katago kooxdiisa Barcelona
Liibaan Fantastic May 8, 2016
(Barcelona) 08 Maajo 2016 Laacibka reer Turki ee kooxda Barcelona Arda Turan ayaa ka soo horjeestay wararka la xiriirinaya inuu isaga tagi doono Barca dhamaadka xiliciyaareed kan.
Turan oo wacdaro ku soo bandhigay kooxda Atletico Madrid sanadihii u danbeeyay ayaa ku biiray Barcelona suuqii xaggaaga isaga oo aan u ciyaarin 6-dii bilood ee ugu horaysay maadama Barca ay ka ganaaxnayd dhanka suuqa kala iibsiga.
29 jirkaan ayaan sifiican ula qabsan Barcelona tan iyo bishii janaayo markaas oo uu bilaabay inuu si rasmi ah ugu ciyaaro kooxda macalin Luis Enrique.
Laakiin Arda Turan ayaa sheegay in Barcelona ay tahay kooxdiisa Riyada isla markaana uusan meelna uga socon dhamaadka xiliciyaareed kan.
“Markii fursadu ay ii ogolaatay kaliya waxaan ku fikiray riyadaydii yaraanta, Barcelona waa kooxdii aan ku riyoon jiray si aan u xirto funaanadooda oo aan saaxiib ula noqdo Iniesta, Messi, Neymar iyo Suarez” ayuu yiri Arda Turan oo diidan inuu ka tago kooxdiisa Barcelona.
AS Roma oo guul gaartay....(Kulan micno gooni ah u sameynayay Francesco Totti)
TOOS u daawo: Barcelona vs Espanyol - LIVE (Shaxda sugan)